रुकुम घ’टनाका दो’सी माथि का’र्वाही र पीडि’तलाई अबि’लम्म्ब न्या’य दियि’योस…रेखा थापा !
✍️रेखा थापा : रुकुम घ’टनाका दो’सी माथि क’र्वाही र पीडि’तलाई अबि’लम्म्ब न्या’य दियि’योस । यस घ’टनामा जो¥डीएकी शुश्मा मल्लको बारेमा जसरी च’रित्र ह’त्या गर्ने खालका र नारी अ’स्मिताको ध’ज्जी उ’डाउने काम भएको छ, तेस्ले फेरि’पनी उत्पी’डित व’र्ग माथि प्र’हार भयो भन्ने लाग्छ ।
समा’ज बि’रुद्द अन्त’र्जातिय प्रेम गर्ने स’हास भएकी बालि’काको च’रित्र ह’त्या गरेर न्या’य हुन्छ त? दो’षिलाई कानु’नी का’र्वाही हुनु पहिले नै एउटा केटी मान्छेले आफ्नो सा’माजिक र चा’रित्रिक सम्प\_त्ती ब_जारमा ली’लाम गर्नु पर्ने ? नेपालमा केटी मान्छेको बेइ’ज्यत गरेर मात्र न्या’य पाउने हो र ?
छान’बिनको क्र’ममा रहेकी कि’शोरिको बारेमा अन’र्गल कुरा लेख्ने छु’ट छ ? स’मुहमा बा’हुन छे’त्री, ज’नजाती जो जस्लाई गा’ली गर्नु छ गरे हुन्छ । एउटा केटी मान्छेको पेटि’कोट स’मातेर बि’द्रोह हुन्छ ? दो’षी वा नि’र्दोषको किटा’न हुनु पहिले नै यसरी मा’नसिक हि’न्सा र प्र’ताडना दिएको का’रण ति कि’शोरि नदिमा हा¥म्फलेमा कस्ले जवा’फ दिन्छ ?
अन्त’र्जातिय प्रे’म गरेको स’ट्टा जसरी उस्को च’रित्र ह’त्या हुँदैछ, यसले जाति’बादी सो’चलाई झन धेरै बाल’वालिकामा स्था’पित गर्ने देखिन्छ । रा’ज्य सँग ल’डनु प¥र्‍यो नि, एउटा १७ बर्ष कि कि’शोरिलाई मान’सिक र सा’माजिक उ’त्पिडन किन ? दो’षी भये का’नुनी का’र्वाही गरियोस । यो नबिर्सौ कि एउटा कि’शोरिको जी’वन ब’र्वाद पारेर न्या’य पाउने हो भने, कुनै पनि छो”रीले भोली कसैलाई माया गर्ने छैनन ।